GIS Manifold, wax dheeraad ah oo leh qaabab
Waqti ka hor waxaan uga hadlay maqaal ku saabsan sida loo abuuro bandhigyo daabacaadda iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS. Waqtigaas waxaan sameynay qaab-dhismeed si cadaalad ah u aasaasan, kiiskan waxaan rabaa inaan muujiyo mid ka sii adag. Tani waa tusaalaha khariidada wax soo saarka cilmiga beeraha; maaddaama khariidadda ugu weyn ay tahay adeegsiga hadda ka socda sawir ...
Nidaamka Macluumaadka Juqraafi iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS
Tani waa mid ka mid ah badeecadaha ay ku faraxsan tahay in la dhiirrigeliyo, oo ruuxii loo dhisay ayaa hadda loo diyaariyey bulshada. Waa buug sharraxaya sida loo hirgeliyo Nidaamka Macluumaadka Juqraafi ee degmada iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS. Noocyada wax laga beddelay ee alaabooyinkani waxay ahaayeen ...
Baridda CAD / GIS, GIS kala cayncayn ah
Buugga Gmail-ka Bilaashka ah
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah badeecadaha nidaaminta ugu qiimaha badan deegaanka Isbaanishka ku hadla ee ku hoos jira mawduuca geospatial. Inaan gacanta lagu hayn dukumintigan waa dambi; Aynu nidhaahno jaahil mashruuca ka hor intaan lagu akhrin maqaalkan Geofumadas. Waxay u badan tahay in wax soo saar sida ...
ArcView Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah QGIS
Google Earth; taageerada muuqaalka ee sawirqaadayaasha
Google Earth, oo dhaafsiisan inay noqoto aalad madadaalo u ah guud ahaan bulshada, waxay sidoo kale noqotay caawiyaha muuqaalka ee sawir gacmeedka, labadaba si loo muujiyo natiijooyinka loona hubiyo in shaqada la qabanayo ay tahay mid iswaafaqsan; waxa aan loo dhihin qalab tarbiyadeed ee juqraafiga ama fasallada cilmiga geodesy. Xaaladdan oo kale waxaan ...
Mawduucyada + 3 sano ee Geofumadas
Ka dib wax yar ka badan seddex sano oo aan la joogay baloogga, halkan waxaan ku soo koobayaa qaar ka mid ah tirakoobyada iga caawiyay inaan qorsheeyo mowduucyada iyo mudnaanta sannadka 2011. Isku dayga inaan ku sii jiro mowduuca la soo koobay ee ku yaal boostada ugu horreysa, tirada guud ee qaybaha ayaa gaartay 31 Khadar guud ahaan waxaan kusoo qaatay qoraalkaas ...
AutoDesk Bentley Systems blog ESRI Google Earth GPS GvSIG OS GIS kala cayncayn ah egeomates My QGIS
Markii ugu dambaysay waxaan kahadalnay shuruudo qaar sababta MapServer iyo aasaaska rakibida. Hadda aan ku aragno qaar ka mid ah hawlgalkeeda layli ay la socoto khariidadaha ku yaal Chiapas. Xagee lagu fuulaa Marka Apache la rakibo, galka daabacaadda ee loogu talagalay MapServer waa galka OSGeo4W oo si toos ah uga sarreeya C: / Gudaha, waxaa jira ...
Alibre, waxa ugu fiican ee farsamada farsamada 3D
Alibre waa magaca shirkad, magaceedu asal ahaan ka soo jeedaa erayga Latin ee Liber, halkaasoo xorriyadda, liberalism, libero ay ka timaado; marka la soo koobo dareenka xorriyadda. Waana ujeedka shirkaddani inay ku saleysan tahay bixinta alaab tayo sare leh qiimo aad u layaab badan. Taariikhda ayaa ina tusaysa in ...
AutoDesk Dwg GIS kala cayncayn ah
Engineering, tabo cusub
Decidiéndonos by MapServer
Aniga oo ka faa'iideysanaya wadahadal dhowaan lala yeeshay hay'ad Cadastre ah oo raadineysay hab lagu daabaco khariidadeeda, halkan waxaan ku soo koobayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dib loogu soo celinayo badbaadinta mowduuca bulshada. Laga yaabee waqtigaas inay caawin doonto qof raba inuu go'aan gaaro ama weydiisto caawimaad geofumado. Waa maxay sababta MapServer seenyada u ahaa qof, oo lahaa ...
AutoDesk Bentley Systems blog Dgn Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah mapserver egeomates My
cadastre, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, qgis
Bil dhib badan waqtigeeda, laakiin ku qanacsanaanta guulaha iyo hamiga qoys ee caruurtayda iyo gabadha indhaha ii shideysa. Waxaan si dhib yar u awooday inaan dhajiyo dhowr jeer, halkan waa soo koobid sawir kooban. Nidaamka shahaadeynta kartida. Khibrad aad u xiiso badan, sharaxaadda heerka shahaadeynta, sheyga bangiga, ...
egeomates My, safarka
G! qalabka, fududeynta isticmaalka Bentley Map
Maalmo ka hor waxaan bilaabay horumar ku saabsan .NET Visual Basic for Microstation, taas oo aan rajeynayo inaan ku xalliyo xaddidaadda Bentley Map ay leedahay, iyada oo Maamulaheeda Geospatial. Si tan loo sameeyo, waxaan qabtay arday duug ah oo aan bilownay geofing xfm halkaas markii uu ka soo baxayay koomaha, anagoo wata cappuccino iyo amaretto wanaagsan ...
Bentley Systems Dgn ESRI Google Earth GIS kala cayncayn ah
Perquisites aan koorsada of ArcGIS
Kahor intaanan u sheegin inaan horumarinayo tababar ku saabsan isticmaalka ArcGIS 9.3, oo leh qaab dhexdhexaad ah oo aad u ballaaran oo ay ugu wacan tahay masaafada, waqtigeyga yar iyo shaqooyinka ardayda. Hadda waxaan idiinka tegayaa gabagabada: Qaabka: Waxaan jeclaan lahaa in wax waliba sahal noqdaan. Haddii ay ahaan lahayd tababar, wax ku baro tusaale la keenay ...
Dgn KML GIS kala cayncayn ah
ArcGIS-ESRI, GIS kala cayncayn ah, safarka
Bentley Map, waxaan rajeynayaa inaan wada jirno
Waxaan hadda helay casuumaad aan kaga soo qeyb galo Wada Jir, dhacdo soo kicisa filashooyin xiiso leh aniga, kadib markay u muuqato in xiisadda dhaqaale ay degeyso fursadahana ay tahay in dib loo howlgeliyo. Kii ugu fiicnaa Dhibaatada adduunka, sanadkii hore Bentley waxay soo bandhigtay shabakadeeda internetka waxayna u tagtay ...
Bentley Systems blog ESRI GIS kala cayncayn ah
Muddo ka hor, baraha tiknoolajiyadda Nederland ayaa tan igu odhan jiray: “Si daacadnimo ah, waan layaabay waxa ay ku qoran tahay bogga Manifold. Waxa dhacaya waa aniga oo aanan weligay ku arag isagoo ku shaqeynaya mashiin ”Isbuucaan, Patrick Webber –waxaa laga helay Aqoonta Spatial- wuxuu sameeyay hadal aan laga fiirsan oo runtii naga dhigay inaan gariirno ...
Isbarbar dhiga CAD / GIS
Kani waa layli isla shuruudaha isku midka ah, si loo cabiro waqtiga ay qaadaneyso in la bilaabo barnaamij laga bilaabo gujinta astaanta ilaa daqiiqada ay socoto. Ujeeddooyin isbarbardhig ah, waxaan u isticmaalay midka ku bilaabma waqti ka yar, ka dibna tilmaam (wareegsan) jeer oo la xiriira tan. Ma garanayo…
AutoDesk Bentley Systems Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, GvSIG, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, qgis
Abuuri khadadka fiilooyinka leh ArcGIS
Fulinta sahan cadastral ah oo leh wadarta guud, marka laga reebo saxnaanta milimitir, waxay sidoo kale faa'iido u yeelan kartaa ujeedooyin kale, maadaama aan leenahay kor u qaadista dhibic kasta. Aynu aragno kiiskan, sida loo abuuro khadadka wareegga, oo aan horay ugu aragnay AutoDesk Civil 3D, oo leh Bentley Geopak iyo Manifold GIS, sidan oo kale ...
AutoDesk Bentley Systems Dgn GPS GIS kala cayncayn ah
ArcGIS-ESRI, cadastre, Featured, GPS / Qalabka, topografia
CAD / GIS-yada waa inay tagaan GPU
Kuwa naga mid ah ee adeegsada barnaamijyada garaafyada, waxaan mar walba fileynaa in kumbuyuutarradu ay leeyihiin xusuus shaqeyn ku filan. Tan dhexdeeda, barnaamijyada CAD / GIS marwalba waa la isweydiiyaa ama waa la cabiraa iyadoo lagu saleynayo waqtiga ay qaadaneyso in lagu qabto howlo maalmeedka sida: Falanqaynta Meelaha Dib-u-hagaajinta iyo diiwaangelinta sawirada Maareynta baahinta xogta Maareynta ...
AutoDesk GIS kala cayncayn ah
tabo cusub, egeomates My
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 9 page Next